Tawhiida Archives - Page 4 of 12 - Ibsaa Jireenyaa
Maqaalee Rabbii (Subhaanahu)-Kutaa 10.1
November 27, 2019 Sammubani One comment
Jireenya keessatti namni dukkanaa fi dhama’iinsa adda addaa keessatti tara. Dukkana fi hurrii jireenyaa tana keessaa bahee ifa keessa deemuuf ibsaa isa barbaachisa. Akkasi miti ree? Kanaafu, ibsa kana eessaa argata ree? Eeti, namoonni karaa fi mala nama jalaa bade namatti himuun hanga ta’e nama qajeelchu danda’u. Garuu jireenyaa fi dhimma guutuu keessatti humna qajeelchu hin qaban. Kanaafu, eenyutu jireenyaa fi dhimma guutuu keessatti nama qajeelchu danda’a ree?
October 27, 2019 Sammubani Leave a comment
B. Ibsa Aayaata muraasaa maqaa Al-Waahid, Al-Ahad of keessaa qabanii
Hiikonni “Al-Ahad-Tokkicha”, “Al-Waahid-Tokko” yommuu ta’an, maqaalee Tokkichummaa Rabbii olta’aa agarsiisaniidha. Tokkichummaan kuni gosoota tawhiidaa sadan ibsa: 1ffaa-Zaataa fi Sifaataan Rabbiin subhaanahu tokkicha ta’u. Kana jechuun Zaataa fi sifaanni Isaa uumamtoota hundarraa adda. Wanti zaata fi sifaata Isaatin wal fakkaatu tokkollee hin jiru. 2ffaa-Gooftummaa (rubuubiyyah) keessatti Tokkicha ta’uu-kana jechuun samii fi dachii, wantoota isaan keessa jiran hunda kan uume, too’atu, jiraachisu fi qindeessu Rabbii Tokkicha. Gabaabumatti hojii Isaa hunda adda Ofii hojjata, eenyullee Isa waliin hin hirmaatu ykn qooda hin fudhatu. 3ffaa-Gabbaramuu (uluuhiyyah) keessatti Inni Tokkicha- Kana jechuun haqaan kan gabbaramu qabu Rabbii Tokkicha. Gabbarriin (ibaadaan) Isaaf malee homaafiyyuu hin ta’u. Sababni isaas, Inni Gooftaa wantoota hundaa uume, too’atu, beeku, arguu, dhagahu, wanta hundaa irratti dandeetti qabuu fi yeroo hundaa jiraataa fi turaa ta’eedha. Wantoonni Rabbii guddaan ala jiran amaloota kanniin qabuu? Wantoota hundaa uumu, too’atu, arguu, beeku, dhagahuu danda’uu? Yeroo hundaa jiraachuu fi turuu danda’uu?
Dubbisa Itti fufii..
October 21, 2019 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti iccitii rizqiin namoota gariif bal’achuu fi namoota gariif immoo dhiphachuu ilaalle turre. Rizqiin bal’achuu fi dhiphachuun wanta namoonni ittiin qoramaniidha. Addunyaa qormaataa tana erga ce’anii jazaan jiraachu akka qabus tuqne turre. Akkuma beekkamu, firiin qormaata irraa argamu wanta ittiin qoraman caala. Rizqiin addunyaa tanaa wanta namni ittiin qoramuudha. Rizqiin Guyyaa Murtii (Yoomu Diin) kennamu rizqii tana caalaa guddaadha. Kanaafu, fedhiin kee guddaan rizqii kam argachuudhaa? Har’as ibsa kanaa itti haa fufnu.
Fedhiin Kee Guddaan Rizqii Kam Argachuudhaa?-Kutaa 1
October 20, 2019 Sammubani Leave a comment
Namni jireenya keessatti yeroo hundaa qanani’ee jiraachu barbaada. Akkasi miti ree? Kanaafi, halkanii guyyaa galii argachuuf oli gadi fiigna. Garuu fiigichoon kuni hanga yoomi itti fufaa? Hanga qananii barbaannu argannuu? Qananii addunyaa barbaannu yoo arganne, guyyaa tokko osoo hin beekin nu harkaa fudhatamti. Ergasii bakka kaleessa ykn san caalaa badaa ta’etti deebina. Garmalee gaabbina. Garuu maaliif akkana jennee hin yaanne? “Addunyaan tuni qananiin ishii dhaabbataa miti. Har’a gammachuun yoo oolan boru immoo faallaa kanaatu nama qunnama. Sila gammachuu fi qananiin gadi dhaabbataan yeroo hundaa turaa ta’e hin jiruu? Isa yoo arganne tasgabboofne teenna?”
Sababoota Rizqii Argachuuf Nama gargaaran
October 18, 2019 Sammubani One comment
Jireenya keessatti namni hunduu rizqii argachuuf halkanii guyyaa battisa. Eeti rizqii kan kennu Rabbii olta’aadha. Garuu kennaan Isaa kuni fedhii, ogummaa Isaatii fi sababootaan kan walitti hidhameedha. Akkuma yeroo darbe jenne sababa jechuun wanta tokko argachuuf karaa hordofaniidha. Akkuma barataan qabxii gaarii galmeessuuf qo’achuu qabu, namnis rizqii gaarii argachuuf sababa rizqiin ittiin argamuu hojjachuu qabaa miti ree? Mee sababoota rizqii argachuuf nama gargaaran muraasa isaanii haa tarreessinu:
Maqaalee Rabbii (Subhaanahu)-Kutaa 8.3
October 17, 2019 Sammubani Leave a comment
B- Bu’aa Maqaalee Ar-Raaziq, Ar-Razzaaq beeku fi itti amanuun argamuu–Kutaa 2ffaa
3-Sababoota haraama ta’an dhiisu fi rizqiif jedhanii haqa faalleessu dhabuu– Namoonni amantin isaanii yommuu xiqqaatu karaa haraamatin rizqii argachuuf carraaqu. Fakkeenyaaf, hanna, malaamaltummaa, mattaa, gowwoomsu fi kkf. Ammas, yeroo garii namni haqa Islaamaa qabate, yommuu abbaan aangoo haqa akka dhiisu ykn wanta sobaa akka hojjatu ajaju, “Rizqii narraa kuta” jedhee sodaachun haqa dhiisa ykn wanta sobaa hojjata. Namni kana hundarraa baraaramee gammachuu fi milkaa’inna argachuuf, Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa Ar-Razzaaq akka ta’e mirkaneefachuudha. Rizqiin harka namaa osoo hin ta’in harka Rabbii waan hundaaf rizqii kennuu keessa jira. Haqa akka dhiisaniif diinonni Islaamaa rizqii nama dhoowwachuun sodaachisu. Rizqiin akka waan harka isaanii jiru godhanii yaadu. Qur’aana keessatti ni jedha:
Maqaalee Rabbii (Subhaanahu)-Kutaa 8.2
October 16, 2019 Sammubani Leave a comment
B- Bu’aa Maqaalee Ar-Raaziq, Ar-Razzaaq beeku fi itti amanuun argamuu–Kutaa 1ffaa
Kutaa darbe keessati Ar-Razzaaq, Ar-Raaziq-jechuun rizqii kan uumu, kennu fi karaa ittiin argatan laaffisuudha jenne turre. Ar-Razzaaq baay’innaan rizqii kennu agarsiisa. Rizqii jechuun wanta namoonni itti hajamanii fi itti fayyadamaniidha. Kanneen akka soorata, uffata, qilleensa, qoricha, beekumsa fi kkf. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa lubbu-qabeenyi lakkoofsi isaanii hangana hin jedhamneef rizqii baay’ee daangaa hin qabne kan kennu waan ta’eef Inni Ar-Razzaaq dha. Namni maqaa kana sirritti itti xinxalluun yoo hubatee fi itti amane bu’aalee baay’ee argata. Isaan keessaa:
Maqaalee Rabbii (Subhaanahu)-Kutaa 8.1
October 15, 2019 Sammubani Leave a comment
Bismillah. Hundi keenya jireenya keessatti soorataa fi galii argachuuf halkanii guyyaa ni carraaqna. Akkuma carraaqqin namoota gargar ta’e galiin isaaniis garagara. Garuu yommuu kana jennu “Galiin isaanii carraaqqi isaanii qofarratti kan hundaa’udhaa? Yookiin madda galii isaanii mataa ofiitii maddisiisu danda’uu?” Dhugumatti kuni gaafi ijoo deebii gahaa barbaadudha. Yoo gaafin kuni furame, namni jireenya keessatti tasgabbii argata. Sababni isaas, wantoota tasgabbii namarraa ari’anii fi sammuu jeeqan keessaa rizqii dhabuu sodaachudha. Akkasi miti ree? Gaafi armaan olii kana deebisuuf, tooftaan jalqabaa nuti fayyadamnu “Madda” fi “Sababni” maal akka ta’an beekudha. Madda jechuun hundee ykn ka’uumsa wanti tokko irraa jalqabamuudha. “Sababa” jechuun immoo wanta tokko argachuuf karaa itti nama geessudha.
Maqaalee Rabbii (Subhaanahu)-Kutaa 7.5
October 11, 2019 Sammubani Leave a comment
D. Aasaara (Bu’aa) Maqaalee Rabbii “Mootii (Al-Malik)” fi “Qabaataa (Al-Maalik)” itti amanuun argamuu
Kutaa darbe keessatti hiikni maqaalee Al-Malik fi Al-Maalik maal akka ta’an ilaalle jirra. Al-Malik Mootii yommuu ta’u, Al-Maalik immoo Qabaataa ykn dhuunfataadha. Namni dhugaadhaan hiika Mootii fi Qabaataa yoo hubate, dukkanni baay’een isarraa saaqama. Mootii fi Qabaataan haqaa eenyu akka ta’e yoo beeke, eessarraa akka dhufe, maaliif akka jiraatu, akkamitti akka jiraatu fi gahuumsi isaa eessa akka ta’e beeka. Sababni isaas, Mootiin Haqaa kan isa argamsiisedha, namni maaliif akka jiraatu fi akkamitti akka jiraatu ibsuuf ergamtoota Kan ergee fi Kitaabban buusedha. Ammas, gahuumsi nama hundaa eesse akka ta’e ni beeksise. Namni kana hunda kan hubatu Mootiin maal akka ta’e yoo beekedha. Mee amma bu’aalee maqaa kana beeku fi itti amanuu irraa argamu muraasa isaa haa ilaallu.
Kuusaa Select Month February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015
Tafsiira Suuratu Az-Zumar-Kutaa-3
Akkaata Laa İlaah İllallah hojii irra olchan-kutaa xumuraa
Akkaataa Laa İlaah İllallah Hojii irra oolchan-4
Shirkiin Rabbiin waliin gabbaramaa godhachuudha
Akkaataa Laa İlaah İllallah Hojii irra oolchan-3
Akkaataa Laa İlaah İllallah Hojii irra oolchan-2